NYI LYNN SECK 18+ DEN: Digitization Tendor
Posted by NLS at 3/07/2010 03:22:00 PM
Hopefully, tender winner will contact you coz they have money to support and you have knowledge. Knowledge is power. :)
Digitization လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဒီနိုင်ငံထဲ ကိုယ့်ထက်သာမယ့်သူ ရှိမယ်တောင်မထင်။ << ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုပြောထွက်တာလဲမသိ :)
Anonymous<< သိချင်ရင် စမ်းကြည့်လေ။ :)
ွTalkii<< Knowledge is power yes but power is cut out :D
စိတ်မဆိုးနဲ့ နော် အရမ်းဘဝင်မြင့်သလားလို့ 
တော် မတော် ကို ပတ်ဝန်းကျင်ကဆုံးဖြတ်တာ
ပါ ..Pride နဲ့Proud က မတူဘူးလားလို့ 
လွတ်လပ်စွာပြောရေးဆိုခွင့်တောင် မရှိရတော့ပါလား။ ပတ်​ဝန်းကျင်က ဆုံးဖြတ်တာကို သူခံနိုင်လို့ ပြောတာ ဖြစ်မှာပေါ့။ မယုံရင် (သူပြောသလို) စမ်းကြည့်လိုက်ပါလား။
it is not pride or proud. it is confidence.
မောင်ညီလင်းဆက်လီု နိုင်ငံမှာအတော်ဆုံးလူကီု သူတို့အသိအမှတ်ပြုသင့်တယ်။
ဆရာ ဇော်ဂျီရဲ့ ပိတောက်ပန်း ကဗျာလေး အမှတ်ရမိတယ်ဗျာ...
အော် ... သူလည်းလေ လောကီသားပေမို့... ကြွားချင်ရှာလိမ့်....
တော်မှန်းသိကြပါတယ်...... ဘေးလူချီးကျူးတာ မစောင့်နိုင်တဲ့သူ ဆိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ချီးကျူးရတာပေါ့... သည်းခံစိတ်လေးနဲ့ဘေးလူတွေ ချီးကျူးတဲ့ စကားကပိုချိုမယ်မထင်မိဘူးလား... ခုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖော်သလိုဖြစ်တော့... ပြုံးချင်ချင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့....